TCDD YHT zụrụ Machinist | RayHaber
HomeTurkeyCentral Anatolia Region06 AnkaraTCDD YHT Machinist ka ịzụta
07 / 11 / 2019 06 Ankara, Central Anatolia Region, Ọrụ, ụgbọ okporo ígwè, General, Oru ngwa ngwa, Isi akụkọ, Turkey
TCDD YHT ga-arụ ọrụ Machinist - TCDD ga-eme nhọpụta 262 Personnel: E meghewo ndị ọrụ TCDD ma kesaa nkesa ndị ọrụ na 5.November.2019. N'ime mkpebi nke ebipụtara na Official Gazette State Railways na-enweghị isi 262 Agụnyere ndị ọrụ.
Mkpebi ahụ ebipụtara na mbipụta nke Gazette nke ugbu a bụ ndị a; N'ihe banyere ụlọ ọrụ gọọmentị nwe obodo na ndị enyemaka, azụmahịa ndị a kpọtụrụ aha n'elu ka a na-eme n'ime oke Iwu Iwu nke 399.
Site na mkpebi nke Onye isi ala, ịkagbu na ịgbanwe ọnọdụ nke ndị ọrụ ga-arụ ọrụ na ọnọdụ nke ndị ọrụ nkwekọrịta na ọnọdụ na ọnọdụ ndị ọrụ obodo Civil mebere n'okpuru Iwu 657 adịghị.
AKW STKWU TCDD
Na ọkwa a bipụtara, TCDD, Central na Provincial, Chief Specialist, Inyocha, Onye ndụmọdụ, Onye Ọchị, Onye Nchịkwa Ọrụ, Onye njikwa, Onye Ọkachamara, Wagon Technician, Onye na-ahụ maka teknụzụ, YHT Mechanic na ndị ọrụ Psychologist.
Tebụl Oge Mmepe TCDD
TCDD center Chief Expert 28
TCDD center soja 1
TCDD center Ndụmọdụ 10
TCDD center mara 26
TCDD n'ógbè Onye njikwa ọrụ 3
TCDD n'ógbè director 15
TCDD n'ógbè Chief Expert 19
TCDD n'ógbè Onye na-egwu ụgbọ ala 120
TCDD n'ógbè Chief ẹkesikpede 18
TCDD n'ógbè Injinia YHT 20
TCDD n'ógbè ọkà n'akparamàgwà mmadụ, 2
G ISN IS B SP PECR??
Esttọputa putara na ndi oru. A ga-ewe ndị ọrụ weghaara ọrụ. Ekwuputaghi ihe omuma banyere ndi oru ohuru na oru ndi atuputara na etinyere mkpebi ahu.
Maka ọkwa nke Mkpebi Mkpebi nke 2019 / 373 nke edepụtara na akwụkwọ akụkọ gọọmentị Pịa ebe
Onye bụ onye na-arụ ọrụ igwe na otu esi ghọọ onye na-arụ ọrụ n'ịgba ígwè ga-anwa ịza nsogbu ahụ. Onye injinia bụ onye na-akwọ ụgbọ eletrik ma ọ bụ mmanụ dizel ma ọ bụ ụgbọ ala ụgbọ ala ụgbọ ala na-ebu ụgbọ ma ọ bụ ibu.
AKW OFKWỌ MACHINERY
Na-eme ka akụkụ nke ụgbọ ala ahụ na-aga ma na-eburu usoro nchekwa dị mkpa, - na-arụ ọrụ locomotive ma na-agbaso iwu mmegharị, tariffs, akara nke onye ọka iwu na ndị ọrụ ụgbọ okporo ígwè ndị ọzọ na-eduzi ma na-achịkwa mmegharị nke ụgbọ oloko - Obere nrụzi na mgbanye n'oge njem ahụ. - Na-edekọ akụkọ mgbe emechara njem ahụ wee jupụta akwụkwọ ndị dị mkpa (akwụkwọ merenụ, wdg).
UTU NA UZI NA-EME
Locomotive (Steam, Diesel, Electric, Diesel-Electric), - Redio, - Movementdị mmegharị, - Scgha, pipụ, wrench, ngwa ọrụ dị iche iche, - Akwụkwọ Ọrụ (akwụkwọ ebe nsogbu bilitere).
Ụlọ ọrụ ọkachamara
Ndi choro ibu ndi oru; - Nwere ike iji anya na ukwu mee ihe nhazi, - Nwere ike meghachi ihe kpaliri ngwa ngwa, - Inwee ike mata ọtụtụ ihe n'otu oge, - Nlezi anya, nwee ọrụ, ma nwee oyi, - Nwere ike ịmata ụcha, na ndị nwere arụ ọrụ aka arụ ọrụ.
NKWUKWỤKWỌ NDỊ NA-ECHICHE
Dika ndi nhazi na aru oru ugbo ala, ha aghaghari oge nile. Ndị ọrụ ahụ ga-arụ ọrụ ehihie na abalị, na ngwụsị izu ma ọ bụ n'oge ezumike, ma na-anọdụ ala mgbe niile na-eduga locomotive. Obereghi, ha nwere ike itinye aka na mberede ụgbọ oloko. Ha na onye na-eziga ozi, ndị isi ụgbọ okporo ígwè, onye ọkụ ọkụ na locomotive na-ekwurịta okwu.
EBE ECHICHE NA ECHIKE
Ndị ọkachamara nwere ike ịrụ ọrụ karịsịa na Turkish State Railways na ụlọ oriri na-edozi, ụlọ ọrụ ígwè na ígwè, n'ime ime obodo okporo ígwè njem ụgbọ njem. Ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu na-eweta nsogbu njem njem oke. Otu n'ime ụzọ kachasị mma na njem nchebe nke ụgbọ okporo ígwè bụ ụgbọ okporo ígwè. Enweghị ike ikwu na ụgbọ okporo ígwè ma ọ bụ njem ụgbọ okporo ígwè na mba anyị dị na ọkwa dị mkpa. Ebe ọ bụ na njem ụgbọ okporo ígwè dị oké mkpa maka mmepe nke mba, ọ bụ ihe dị mkpa iji mee mwakpo dị mkpa na mpaghara a na mba anyị. Ọganihu na imeziwanye okporo ụzọ ụgbọ okporo ígwè pụtakwara ọrụ nke ndị ọzọ na-arụ ọrụ.
Ụlọ ọrụ nke ngalaba
A na-enye ọzụzụ n'ụzụ ọzụzụ n'ime ụlọ ọrụ ọzụzụ jikọtara na General Directorate of Turkish State Railways. Ọzọkwa, a na-enye ndị gụsịrị akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ sekọndrị ọrụ ọzụzụ na ọrụ ọrụ.
AKWỤKWỌ NDỊ NA-AHỤ AKWỤKWỌ
Ọ dịkarịa ala, ndị gụsịrị akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ praịmarị chọrọ akwụkwọ agụmakwụkwọ. - Na mgbakwunye, ọ dị mkpa inweta mkpesa kọmitii nwere ụda sitere n'ụlọ ọgwụ TCDD.
MGBE ỌGWỤRỤ NA NTỤKWỌ NDỊ EDUCATION
Ọzụzụ nke ndị ọrụ igwe na General Directorate nke Turkish State Railways; Ọnwa 18 maka NCDD High School graduate, 3 afọ maka ndị ụlọ akwụkwọ sekọndrị na-arụ ọrụ ụlọ akwụkwọ. Ndị gụsịrị akwụkwọ na ụlọ akwụkwọ sekọndrị nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe, TCDD General Directorate of Enterprises malitere site na ndị nnyemaaka nnyemaaka na ndị na-aga nke ọma, site na itinye aka na ọzụzụ na ọmụmụ ihe nwere ohere ịghọ ígwè. Maka nke a, ọrụ 3 ọnwa, yana ọrụ ntinye aka na engineer ruo mgbe a ga-eme akwụkwọ ikikere. Ná ngwụsị nke ọhụụ ahụ, a na-enye ndị na-aga nke ọma na nyocha ahụ ikikere ịkwọ ụgbọala.
MGBE ỌHỤRỤ ỌZỤ
Ndị gụsịrị akwụkwọ ọhụrụ na gụsịrị akwụkwọ na TCDD High School na ndị na-agụsị akwụkwọ nke Ụlọ Akwụkwọ Ọzụzụ Ndị Ọrụ, nke a na-ekwupụta n'ihu ọha site n'ule, na-amalite ọrụ ha dịka ndị ọrụ inyeaka. Mgbe oge ụfọdụ nke ọzụzụ ọzụzụ, ha natara aha nke ọkwọ ụgbọ ala. Ndị na-enweta diplọma dịka onye ọrụ mgbochi nwere ike ịghọ isi ndị ọrụ nchịkwa site na ịga n'ihu na ọmụmụ ihe ha.
SCHOLARSHIP, ỤBỤRỤ NA Ụgwọ
N'oge ọzụzụ ndị na-arụ ọrụ site n'aka General Directorate nke Turkish State Railways (TCDD), ụgwọ ọnwa ọ bụla site na ogo na ọkwa nke Iwu ahụ gbasara ndị ọrụ obodo No.NNUMX na-enye ndị gụsịrị akwụkwọ na ụlọ akwụkwọ dị elu. A na-ahọpụta ndị na-arụ ọrụ dị ka ndị na-arụ ọrụ dịka ndị ọrụ na-adịgide adịgide ma ọ bụ ndị ọrụ nkwekọrịta. Ndị a họpụtara dị ka ndị ọrụ na-adịgide adịgide na-anata ụgwọ ọnwa kwa ọnwa na 657 ugboro ụgwọ kacha nta na ụgwọ ha pụrụ iche. Ndị ọrụ a na-achọpụta na-anata ụgwọ ọnwa kwa izu site na 2 ruo 4 ugboro ụgwọ ọrụ kachasị.
TCDD Ụgbọ njem ga-enweta ọrụ machinist
TCDD Transport Ga-eme 73 Machinist n'ikuku!
TCDD Mechanic ọrụ mara ọkwa ọkwa
CDgbọ njem TCDD nwere nkwarụ, ndị na - ebu ụzọ na ndị ọrụ…
YHT lanarịrị ígwè ọrụ ahụ mebiri emebi kwuru maka oge mbụ
Ihe ọghọm ụgbọ oloko na laini YHT na Bilecik, Machinist 2…
TCDD Mechanic na shearers chọrọ iyi
TCDD na-emepe ihe ọmụmụ iji zụọ usoro
Ọnụ ego TCDD na-ahụ maka ọrụ nchịkọta Ego ọtụtụ 2018
TCDD Transport Mechanic Worker Nyocha
Ihe ngosi mgbasa ozi: DE 24000 Ụdị Injinia Locomotive ı
Ngosipụta ọmịiko: Ndị ọrụ ụgbọ mmiri 4 dị na Gulf na
Ngosipụta ọmịiko: Ndị ọrụ Machinist 4 dị na Gulf in
Ihe ngosi mgbasa ozi: DE 24000 ụdị locomotive ı
Uzo esi abu ihe eji eme ihe
n 'oru nke ndi oru ndi ozo
Oge ntinye akwụkwọ nke TCDD
Ntinye aka nke TCDD YHT Machinist
Curezụta YHT Machinist
Site na Protocol N'agbata Obodo Isparta na TCDD Ibu Ibu na Obodo ga-ebelata